घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? सस्तो र सुरक्षित घर ३ लाखमै बनाउन सकिने – Hamro Lumbini
No Comments on घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? सस्तो र सुरक्षित घर ३ लाखमै बनाउन सकिने
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले औसत आयस्रोत भएका मध्यम वर्गीय नेपालीलाई आफू बस्ने घर बलियो र सुरक्षित दुवै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चेत खोल्यो । तर, त्यो चेतनाले बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, फलामे डण्डी, सिमेण्ट र इँटाको प्रयोग गरेर आरसीसी ढलान गरेका घर मात्र बलियो हुन्छ भन्ने बुझायो ।
भूगोलका हिसाबले अतिविकट नेपालका ग्रामीण बस्तीमा आरसीसी घर बनाउन महँगो र असहज छ । घण्टौं हिँडेर पुग्नुपर्ने निर्माण स्थलमा भनेजति निर्माण सामग्री पुर्‍याउन सहज छैन । यस्तो अवस्थामा समय र पैसा धेरै खर्च हुन्छ । कृषि पेशामा निर्भर मध्यम तथा निम्न आयस्रोत भएका घरपरिवारको सम्पत्ति भूकम्पले नष्ट भएपछि उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भए । साथै, उक्त विपत्तिले उनीहरूलाई नयाँ सुरक्षित घर बनाउनै नसक्ने कमजोर अवस्थामा पनि पुर्‍याएको छ । पुनर्वासका लागि बनेका संरचना सुरक्षित र सस्तो होस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ ।
घरमा तारजाली छानोदेखि तलासम्म बाँधिएको हुन्छ । त्यसैले, यस्ता घर परम्परागत घरभन्दा सुदृढ हुन्छन् । यसका निर्माण सामग्री पायक पर्ने नजीकको बजारबाट मानिसले सजिलैसँग बोकेर ल्याउन सक्छन् ।लागत
सोही गाउँपालिका प्रमुख भरतमणि दुलालले दोलखामा हालसम्म २० प्रतिशत संरचना पुनर्निर्माण भएको बताए । ‘अधिकांश घर यही प्रविधिबाट बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सस्तो र छरितो छ ।’ आर्थिक अभियान बाट